Multi-Vitamin: December 2011
Posted by 925 at 09:587comments
၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွက် သိပ္ပံတီထွင်မှုတွင် HIV ကာကွယ်ဆေးသစ်မှ ဆွတ်ခူး
ကြာသပတေးနေ့တွင် ထွက်ရှိလာသည့် သိပ္ပံဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြရာ၌ ၂၀၁၁ ခုနှစ် အတွက် သိပ္ပံပညာရပ်ဆိုင်ရာ ထိုးဖောက်တည်ထွင်နိုင်မှု အတွက် HPTN 052 အမည်ရ စမ်းသပ်အဆင့် HIV ရောဂါကုဆေးကို သတ်မှတ်ပေး
လိုက်ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါ တွေ့ရှိချက်အရ HIV ရောဂါ ကူးစက်ခံရသည့် လူမှာ ၎င်းအနေဖြင့် ရောဂါပိုးများ များစွာ မပျံ့နှံ့သေးပါက ကိုယ်ခံစွမ်းအား အတော်အသင့် ကောင်းမွန်နေ သည့် အချိန်မှစတင်ပြီး ယင်းဆေးကို သောက်သုံးလျင် ၎င်းနှင့် လိင်ကွဲ ဆက်ဆံဘက် ရောဂါပိုး မရှိသူအား HIV ရောဂါကူးစက်နိုင် မည့်ဘေးမှ ၉၆ ရာခိုင်နှုန်းအထိ တားဆီးနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
Posted by 925 at 09:340comments
နေမုန်တိုင်းကြောင့် ရေဒီယို ဆက်သွယ်မှုများ ပြတ်တောက်နိုင်
မကြာသေးမီက ဖြစ်ပွားခဲ့ရသည့် နေ လုံးကြီးအတွင်းမှ ဆိုလာမုန်တိုင်း ပေါက်ကွဲ မှုဖြစ်စဉ်ကြောင့် အမှုန် များ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ကမ္ဘာကြီးအတွင်းတွင် မိုးသောက် အလင်းတန်းများ ပေါ်ထွက်လာခြင်း သို့မဟုတ် ရောင်ခြည်ဖြာ ထွက် မှုဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပွားပြီး ရေဒီယိုလှိုင်းများ ယာယီ အနေဖြင့်ပြတ်တောက်သွားနိုင်
လွန်ခဲ့သည့် ဒီဇင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့ရသည့် coronal mass ejection (CME) ခေါ် ဆိုလာပေါက်ကွဲမှု အကြီးစားဖြစ်စဉ် တစ်ခုကြောင့် လျှပ်စစ် သံလိုက်မှုန်များမှာ ကမ္ဘာဆီသို့ လွင့်စင်လာပြီး ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ကမ္ဘာ့သံလိုက် စက်ကွင်ကို ၇ နာရီခန့်ကြာမြင့်သည့် ထိခိုက်မှုဖြစ်စေနိုင်မည် ဖြစ်သည်ဟု ကျွမ်းကျင်သူများမှ ခန့်မှန်းခဲ့ကြသည်။ အလားတူပင် နောက်ထပ် CME တစ်ခုမှာလည်း ယင်းနေ့တွင်ပင်
နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်ဖြစ်လာနိုင်ပြီး ကမ္ဘာကြီး၏ သံလိုက်စက်ကွင်းကို ထိခိုက်စေနိုင်မည် ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
Posted by 925 at 07:55 1 comments
ရင်သားကင်ဆာဖြစ်နေသောအမျိုး​သမီး​​တစ်ဦး​အား​ ဝက်အ​ရေ​ပြား​ဖြင့်​ ရင်သား​​အစား​​ထိုး​ကုသ
ရင်သား ​ကင်ဆာ ​ရောဂါကို ခံစား​ခဲ့​ရပြီး​နောက် ရင်သား​ဆုံး​ရှုံး​ခဲ့​သည့်​ အမျိုး​သမီး​တစ်ဦး​အား​ ဝက်အ​ရေပြား​ဖြင့်​ အစား​ထိုး​ ကုသမှု ပြုလုပ်​ပေး​ခဲ့​ကြောင်း​ သိရသည်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံမှ အသက် ၃၅ နှစ်အရွယ် ကလာရာ ဘာရယ်သည် ညာဖက်ရင်သား​ ဖြတ်​တောက်ပစ်ခဲ့​ရပြီး​ ခွဲစိတ်မှု သုံး​ကြိမ်ခံယူခဲ့​ရသည်။ သူမက တင်း​နစ်ကို အလွန်ဝါသနာပါပြီး​ ပခုံး​လှုပ်ရှား​မှုများ​ကို ကန့်​သတ်မှု ဖြစ်​နေခြင်း​အား​ စိတ်ပျက်ခဲ့​ကြောင်း​ ​ပြောကြား​ခဲ့​သည်။ The Sun သတင်း​စာက သူမသည် မူလက ဆီလီကွန်ဖြင့်​ အစား​ထိုး​ရန် ရည်ရွယ်ခဲ့​သော်လည်း​ အတုအပ ပစ္စည်း​များ​ကို ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း​ ထည့်​သွင်း​ရန် စိတ်ညစ်မိ​သော​ကြောင့်​ အခြား​နည်း​လမ်း​ကို ရှာကြံခဲ့​ကြောင်း​ ​ဖော်ပြသွား​သည်။
Posted by 925 at 08:590comments
Posted by 925 at 07:550comments
Posted by 925 at 23:223comments
ခေါင်းတစ်လုံး ၌ နှုတ်သီး နှစ်ခု၊ ပါးစပ်ပေါက် နှစ်ပေါက် ပါရှိသည့် ထူးခြားသော ၀က်ကလေး တစ်ကောင် မွေးဖွား
နေပြည်တော် ပျဉ်းမနား မြို့၊ ကျော်ညီ နောင်ရပ် ကွက်၊ ကေးလမ်းရှိ အိမ် တစ်အိမ်၌ မွေးမြူ ထားသည့် ၀က်မကြီးမှ ခေါင်းတစ်လုံး ၌ နှုတ်သီးနှစ်ခု၊ ပါးစပ်ပေါက် နှစ်ပေါက် ပါရှိသည့် ၀က်က လေး တစ်ကောင် ဧပြီ ၂၄ ရက် ညနေ ၆ နာရီ ခန့်တွင် မွေးဖွား ခဲ့သည်။
အဆိုပါ အိမ်၌ မွေးမြူ ထားသည့် ၀က်မကြီးမှ ၀က် ကလေး ကိုးကောင်မွေးရာ တွင် ခုနစ်ကောင် မြောက်၌ ဤသို့ထူး ခြားသည့် ၀က်ကလေး အား မွေးဖွား ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ခေါင်းတစ်လုံး ၌ နှုတ်သီး နှစ်ခု ပါရှိ သည့် ထူးခြားသော ၀က်ကလေး မှာ ၀က်မလေး ဖြစ်ပြီး နှုတ်သီး တစ်ခုတွင် ပါးစပ်ပေါက် တစ်ခုစီ ပါရှိ၍ နှာခေါင်း ပေါက်လေး ပေါက်၊ လျှာနှစ်ခု ပါရှိသည်။ ပါးစပ် ပေါက် နှစ်ခု စလုံးတွင် သွားများ ပါရှိ ၍ ပါးစပ် ပေါက် နှစ်ခုစလုံးမှ မိခင်ဝက်မ ကြီး၏ နို့နှစ်လုံး အား တစ်ပြိုင်နက် စို့နိုင် ကြောင်း ၀က်မကြီး၏ ပိုင်ရှင် ဖြစ်သူက ရှင်းပြသည်။
Posted by 925 at 21:040comments
Obama ရဲ့ စီးတော်ယာဉ် (The Beast) နှင့် ၄င်း၏လျှို့ဝှက်ချက်များ
အမေရိကန်သမ္မတ ဘားရက်အိုဘားမား ရဲ့ စီးတော်ယာဉ် The Beast နဲ့ The Beast ရဲ့ တည်ဆောက်ပုံ ၊ ခံနိုင်ရည် ၊ လျှို့ဝှက်တပ်ဆင်ထားတဲ့ ကိရိယာ တွေ ၊ ယခင် သမ္မတဟောင်း J.F ကနေဒီ လုပ်ကြံခံရပုံ (လုံခြုံရေးအားနည်းခြင်းကြောင့်) ၊ ဒါကြောင့် အဆင့်မြင့် လုံခြုံရေး ကိရိယာ များနှင့် တပ်ဆင်
တည်ဆောက်ထားသော အိုဘားမားရဲ့ စီးတော်ယာဉ် The Beast အကြောင်းကို ဗဟုသုတ ရစေခြင်းအလို့ငှာ တင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Posted by 925 at 06:260comments
Posted by 925 at 05:100comments
ကိုယ်ပျောက်အင်္ကျီတဲ့လား၊ သိပ္ပံသုတေသီတွေကတော့ ကိုယ်ပျောက်အင်္ကျီဟာ တစ်ကယ်ဖြစ်လာနိုင်ပြီလို့ ပြောပါတယ်။ ထို ကိုယ်ပျောက်ဝတ်ရုံကတော့ ဟယ်ရီပေါ်တာ ရဲ့ ကိုယ်ပျောက်ဝတ်ရုံမျိုးဖြစ်ပေါ့လေ။ လန်ဒန်မျို့မှာရှိတဲ့ သုတေသီများကတော့ စတာလင်ပေါင် ၄၈ သန်းကုန်ကျမှာဖြစ်တဲ့ ကိုယ်ပျောက်ဝတ်ရုံဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းကို ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဂျေကေရိုးလင်း ပုံပြင်တွေထဲကလို့ လူငယ် မှော်ဆရာလေးတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ်ပျောက်ဝတ်စုံခြုံပြီး
ကျောင်းကိုသွားတာ ဘယ်သူမှမတွေကြသကဲ့သို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့တော့ Imperial ကောလိပ်က ရှာဖွေမှု့ပြုလုပ်သူများကတော့ မကြာခင်မှာ ကိုယ်ပျောက်ဝတ်ရုံဟာတကယ်ဖြစ်လာတော့မှာ
Posted by 925 at 01:230comments
မျက်နှာနှစ်ဖက်ရှိတဲ့ကလေးငယ်ကို အိန္ဒိယတွင် မွေးဖွား
အိန္ဒိယ နိုင်ငံတွင် မျက်နှာ နှစ်ခုနှင့် ကလေးငယ်ကို
မွေးဖွားပြီးတစ်လအကြာမှာ ဆရာဝန်က ကလေးက မျက်နှာနှစ်ခု၊ပါးစပ်နှစ်ပေါက်နှင့် မျက်လုံးနှစ်စုံ သို့သော် နားရွက်ကတော့ နှစ်ခုပဲပါရှိပါတယ်။
အဲဒီကလေးငယ်ကို အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူးဒေလီရဲ့ အနောက်မြောက် ကီလိုမီတာ ၅၀ အကွာမှာရှိတဲ့ Uttar Pradesh ဆိုတဲ့ရွာကလေးမှာ
မွေးဖွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးငယ်ရဲ့မိဘတွေကတော့ ကလေးက ဘုရားပေးတယ်လို့ပဲ သဘောထားပါတယ်တဲ့။ ကလေးငယ်မွေးဖွားပြီးနောက် ရွာသားတွေက သူတို့ရဲ့ နတ်ဘုရားဝင်စားတဲ့ ကလေးငယ်ဆိုပြီး ကြိုဆိုကြပြီးလက်ဆောင်များနှင့် အလှူငွေများကို ကလေးငယ်အတွက်ပေးအပ်
ဆရာဝန်ကတော့ ကလေးငယ်ဟာ ကျန်းမာရေးကောင်းပြီး ပုံမှန်အသက်ရှင်ပြီးအသက်ရှူလမ်းကြောင်း
ပါတယ်လို့ ခွဲစိတ်ခဲ့တဲ့ ဆရာဝန်ကဆိုပါတယ်
Posted by 925 at 00:470comments
တရုတ်အင်ပါယာ ဧကရာဇ်မင်း​​မြတ် ကွင်​​လောင် လက်ထက်က သုံး​​စွဲခဲ့​​​သည့်​​​ ​​ကျောက်စိမ်း​​ တံဆိပ်တုံး​​ကို ​​လေလံတင် ​​ရောင်း​​ချခဲ့​​​ရာ ယွမ်​​ငွေ ၁၆၁ သန်း​​ ရရှိခဲ့​​​​​ကြောင်း​​ သိရှိရသည်။
ယခုသီတင်း ​​ပတ် အ​​စောပိုင်း​​က ​​ဘေဂျင်း​​မြို့တွင် ပြုလုပ်​​သော ​​လေလံပွဲအတွင်း​​ အဆိုပါ တံဆိပ်တုံး​​ကို ယခု​​ဈေး​​ဖြင့်​​​ ဝယ်ယူခဲ့​​​ခြင်း​​ဖြစ်သည်။ ထို​​ဈေး​​နှုန်း​​သည် ​​ကျောက်စိမ်း​​ဖြူဖြင့်​​​ ထွင်း​​ထု ပြုလုပ်ထား​​​​သော ပစ္စည်း​​များ​​အတွက် အမြင့်​​​ဆုံး​​ စံချိန်တင် ​​လေလံ​​ဈေး​​လည်း​​ ဖြစ်လာသည်။
Posted by 925 at 00:250comments
Posted by 925 at 08:360comments
တိရိစ္ဆာန်အခွင့်အရေးအဖွဲ့က ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံ့ချတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံမှ ငါးအရှင်ကို ထမင်းစားခန်းတစ်ခုမှာ စားတဲ့ YouTube ဗီဒီိယို ကတော်တော်လေ ရေပန်းစားလူကြည့်များနေပါတယ်။ ထိုဗီဒီယိုကတော့ အသက်ရှုနေတဲ့ငါးတစ်ကောင်ကို ပန်းကန်ပြားတစ်ခုထဲ ထည့်ပြီး တဖြေးဖြေးယူစားနေတဲ့ပုံကို ဗီဒီယိုရိုက်ယူပြီး YouTube မှာတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ငါးသိုင်းငါးကြင်း တစ်ကောင်ကို အော်ဒါ မှာလိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ စားဖိုမှုးက သူခန္ဓာကိုယ်ကို ချက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခေါင်းကိုတော့ ရေစိုဝတ်စတစ်ခုနဲ့ အသက်ရှူနိုင်အာင် ပါတ်စည်းထား ပြီး ထိုသို့ မလုပ်ခင် ပန်းကန်ပြားထဲမှာ အချဉ်ရည်နှင့် အုပ်ပြီးအရင် နေရာချပါတယ်။ YouTube ဗီဒီယိုမှာပြတာကတော့ ငါးအရှင်ရဲ့အသားကို တူဖြင့်ဖဲ့မထုတ်ခင် အရင်ဆုံးတူဖြင့် လျှောက်ထိုးကြည့်ပါသေးတယ်။ တိရိစ္ဆာန် အခွင့်အရေးအဖွဲ့မှ ပီတာဆိုသူက ထိုဗီဒိယိုကို စက်ဆုပ်ရွံရှာစရာဗီဒီယိုလို့ ခေါ်ခဲ့ပြီး
ထိုဗီဒီယိုကို ဒီတစ်ပါတ်တွင်းမှာတင် ကြည့်ရှု့သူလူဦရေပေါင်း ၁၂ဝဝဝဝ ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့ လွန်လွန်ကဲကဲ စားသောက်မှု့တွေဟာ တရုတ်နိုင်ငံမှ ပထမဆုံးစတင်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ မျောက်ဦးနှောက်ဖောက်စားတာ နှင့်တခြားသော ဟင်လျာများအဖြစ်
ခွေး ကြောင် မြွေကြွက် အိမ်မြှောင် နှင့် ကြွက်ပေါက်စ လေးများကို စားတာလည်းရှိကြပါတယ်။
Posted by 925 at 08:19 1 comments
မိုဘိုင်းဖုန်းလိုချင်လို့ မိမိကလေးကို ရောင်းစားလိုက် သတဲ့။
တရုတ်နိုင်ငံ Chongqing မှာနေတဲ့ လူငယ်စုံတွဲ တစ်တွဲဟာ သူတို့ရဲ့ ကလေးကို တရုတ်ယွမ်ငွေ ၂၅ဝဝ (U$ 366)နဲ့ ရောင်းစား ခဲ့တယ်လို့ Chongqing Economic Times သတင်း မှာ အင်္ဂါက ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ထိုစုံတွဲဟာ နောက်တော့ နောင်တရပြီး သူတို့ ကလေးကို ပြန်လိုချင်ခဲ့တယ်လို့ ရဲဝန်ထမ်း တစ်ယောက်က ပြောပြပါတယ်။ ထိုကလေးရဲ့မိခင်က အသက် (၁၉)နှစ် အရွယ် Zhang Yao ဖြစ်ပြီး အဖေဖြစ်သူကတော့ ၂၁ နှစ်ရွယ် Xin ဆိုတဲ့သူဘဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ နှစ်ယောက်ဟာ အင်တာနက်ပေါ်မှာ တွေ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး အချိန်ခဏလေးအတွင်းမှာ ချစ်ကြိုက်ခဲ့ပြီး လွန်လွန်ကြူးကြူးတွေ
ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ Zhang ဟာ ကျန်ခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလထဲမှာ ကလေးမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ ဟာ လက်မထပ်ရသေးပါဘူး။ မွေးပြီးလို့ ၆ ရက်အကြာမှာတော့ သူတို့ဟာ ကလေးကို Li Yong လို့ခေါ်တဲ့ လူတစ်ယောက်ဆီမှာ ရောင်းစားခဲ့ပါတယ်။ ထိုလူက ကလေးကို နောက်တစ်ရက်မှာတော့ ယွမ် တစ်သောင်းနဲ့ ထပ်ပြီးရောင်းဖို့ လုပ်တာကို ပတ်ဝန်းကျင်က ရိပ်စားမိပြီး ရဲ ကိုတိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Zhang နဲ့ Xin တို့ကို စုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ သူတို့ရဲ့မိဘတွေဟာ
Posted by 925 at 19:200comments
ဦးခေါင်းနှစ်လုံးပါရှိသည့် ကလေးငယ်အားမွေးဖွား... ကျန်းမာစွာရှိသည့် အပြင် ဦးခေါင်းနှစ်လုံးစလုံးမှ နို့စို့ နိုင်....
ဘရာဇီးနိုင်ငံသူအမျိူးသမီးတစ်ဦးမှ ဦးခေါင်းနှစ်လုံးပါရှိသည့် 
ကလေးငယ်တစ်ဦးမွေးဖွားခဲ့ သည်ဟု ယနေ့ ထုတ်သတင်းများကဆိုပါတယ်...
၉.၉ ပေါင်ကိုယ်အလေးချိန်ရှိ အဆိုပါကလေးငယ်အားဘရာဇီးနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း၊
ပါရာပြည်နယ်ရှိ အနာဂျာ့ စ်ဆေးရုံတွင် ဗိုက်ခွဲမွေးဖွားခဲ့ ရတာဖြစ်ပါတယ်....
ကလေးငယ်တွင် ဦးခေါင်းနှစ်လုံးပါရှိပြီး နှလုံးတစ်ခုရှိကာ ခန္ဓာကိုယ်၏
အရေးပါသောအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများ အားလုံး ပုံမှန်အလုပ်လုပ်လျှက်ရှိနေပါတယ်...
Posted by 925 at 18:420comments
Nadya Denise Doud-Suleman Gutierrez လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးကို မီဒီယာလောကထဲမှာတော့ Octomom လို့လဲ တစ်မျိုးတဖုံ သိကြပါသေးတယ်။ ထို အမေရိကန် အမျိုးသမီးဟာ ယောက်ျားလေး ခြောက်ယောက်နှင့် မိန်းခလေးနှစ်ယောက် ရှစ်မွှာပူးကိုမွေးဖွားခဲ့သူဘဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ လောလောဆယ်တော့ ကယ်လီဖိုးနီးယား မှာနေထိုင်ပါတယ်။ အမေရိကန်မှာ ရှစ်မွှာပူးမွေးဖွားပြီး ခလေးအားလုံးအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့ ဒုတိယမြောက် မိခင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးတွေရဲ့ နာမည် နဲ့ မွေးဖွားစ ကိုယ်အလေးချိန်တွေကတော့....
Posted by 925 at 10:262comments
ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံး လေးဘီးတပ် ဆိုင်ကယ် စတင်ရောင်းချ
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဈေးအကြီးဆုံးဟု ဆိုနိုင်မည့် ဈေးနှုန်းတစ်ခုဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော မော်တော်ဆိုင်ကယ် တစ်စီးမှာ စတင်ရောင်းချတော့ မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ပြင်သစ်ကုမ္ပဏီ တစ်ခုဖြစ်သော Lazareth မှာ Wazuma V8 ဟုအမည်ရသော လေးဘီးတပ်မော်တော်ဆိုင်ကယ် တစ်စီးကို စတင်ရောင်းချေ တာ့မည်ဟု ကြေငြာခဲ့ကာ တစ်နာရီလျင်မိုင် ၁၅၀ အထိမောင်းနှင့် နိုင်ရန်ပြုလုပ်ထားကြောင်း လည်းသိရသည်။ အဆိုပါ ဆိုင်ကယ်ကို ကမ္ဘာ့ပေါ်ရှိ ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ကြော်ငြာ ရောင်းချသည့် JamesList ဝက်ဆိုက်တွင်တင်ထားပြီး အခွန် မပါ ယူရို ငွေ နှစ်သိန်း ဖြင့် ရောင်းချရန် ဈေးကမ်း လှမ်းထားသည်။
အဆိုပါကားမှာ Ferrari အင်ဂျင်ကို အသုံးပြုထားပြီး BMW မှပြုလုပ်သည့် ဂီယာခြောက်ခုထိုး ဂီယာလည်း တပ်ဆင်ထားကြောင်း သိရသည်။ ယခုဆိုင်ကယ်ကို မြင်းကောင်ရေ ၂၅၀ အားရှိသည့် အင်ဂျင်ဖြင့် စတင် မောင်းနှင်နိုင်မည်ဖြစ်ကာ ဆိုင်ကယ်အလေးချိန်မှာလည်း ၆၅၀ ကီလို ဂရမ်သာရှိကြောင်း သိရသည်။ အလားတူပင် ယခု ဆိုင်ကယ်တွင် သုံးထားသည့် ဆိုင်းထိန်းစနစ်မှာလည်း အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး မြေပြင်ညီပုံစံ ရှော့ဘားလေးခု ပါဝင်ကာ အာရုံခံစနစ်များလည်း တပ်ဆင်ထားကြောင်း သိရသည်။ သို့ရာတွင် ယင်းမော်တော် ဆိုင်ကယ်မှာ ဗြိတိန်တွင် မောင်းနှင်ခွင့်ရမည် မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ပိုင်လမ်း ရှိမှသာ မောင်းနှင်နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Posted by 925 at 09:442comments
ဆူးပေါ်ဖက်ကျ သောကြောင့် ဆူးကျိုးသွားရခြင်း အကြောင်း
အနောက်ဂျာမဏီရှိ Darmstadt တရားရုံး မှာ ဂျာမဏီနိုင်ငံက နာမည်ကြီး No Angels အဖွဲ့မှ ပေါ့ပ် အဆိုတော် Nadja Benaissa ၂၈နှစ် ကို စီရင်ချက် ချခဲ့ပါတယ်။ စီရင်ချက်မှာထောင်ဒါဏ် ၁ဝ နှစ်ဖြစ်ပြီး ထိုအထဲမှ ၂ နှစ်ဆိုင်းငံ့ ဖြစ်ပါတယ်။ အမှု့ကတော့ သူနဲ့ အတူ လိင်ဆက်ဆံခဲ့တဲ့ ချစ်သူကို သူ့မှာ HIV ရောဂါရှိတာကို မပြောခဲ့မိဘဲ လိင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီး သူချစ်သူပါ HIV ရောဂါကူးခဲ့တဲ့ အတွက် သူတပါးအား ရောဂါ ကူးစေအောင် လုပ်တဲ့အမှု့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ဆူးပေါ်ဖက်ကျတာ ဆူးကျိုးသွားရတဲ့အဖြစ်ပါ။ Benaissa ကတော့ သူ့အနေနဲ့ သူနဲ့ဆက်ဆံခဲ့တဲ့ ချစ်သူကို HIV ရောဂါရှိတာကို မပြောဘဲ အကာအကွယ်မဲ့ (အဖော်မဆောင်ဘဲ)လိင်ဆက်ဆံခဲ့တာကို ဝင်ခံသော်ငြားလည်း ချစ်သူကို ကူးပါစေဆိုပြီး တမင်ရည်ရွယ် လုပ်ခဲ့တာမဟုတ် ရပါဘူးဆိုပြီး တရားရုံးကို လျှောက်လဲချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Benaissa ကတော့ သူ့ရင်ထဲမှာ တကယ့်ကိုခံစားနေရပါတယ်လို့ ဝမ်းနည်းစွာ တောင်းပန်စကား ဆိုခဲ့ပြီး။ အချိန် နာရီတွေကို နောက်ပြန်
ပြန်လည့်လို့ ရခဲ့မယ်ဆိုရင် ပြန်လည့်ပြီး သူ့အမှားတွေကို ပြင်ခြင်တယ်လို့
Posted by 925 at 21:330comments
လေပေါ်မှာ ၈ နာရီကြာ မတ်တပ်ရပ်ပြီး မျက်လည့်ပြသွားတဲ့ ချီလီနိုင်ငံက ညီအစ်ကို
Chile နိုင်ငံရဲ့မြို့တော် Santiago မှာ လူလယ်ခေါင် ကြီးမှာ သူတို့ရဲ့ မျက်လည့် စွမ်းရည်ကို ပြသွားတာဖြစ်တယ်။ လူတွေကတော့ ထုံးစံအတိုင်း တစ်ယောက်တစ်ပေါက် ပြောကြတာပါဘဲ။ အမြင့်ပေ ၇ မီတာ မှာ ၈ နာရီ အကြာ လေထဲမှာ ရပ်နေတဲ့ပုံမျိုး မျက်လှည့် ပြသွားတာပါ။
Posted by 925 at 19:590comments
ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး ရာသက်ပန် အစားထိုး စက်နှလုံး ကုသအောင်မြင်
အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ်လူငယ်လေးတစ်ယောက်ကတော့ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ရာသက်ပန် စက်နှလုံး တပ်ဆင်ရတဲ့ သူဖြစ်ပါတယ်။ အမည်မဖော်ပြထားတဲ့ ထိုလူငယ်လေးကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ အပါတ်က ခွဲစိတ်ခန်းထဲမှာ ၁ဝ နာရီ ကျော်ကြာ စက်နှလုံး အစားထိုး ခွဲစိတ်ကုသခဲ့ရပါတယ်။ ထိုလူငယ်လေးဟာ ကြွက်သားများသေတဲ့ ရောဂါကို ခံစားရပြီး သေဆုံးဖို့ ကြိမ်းသေသလောက်ရှိနေတဲ့ အခြေအနေမှာ ထိုကဲ့သို့ စက်နှလုံးအစားထိုး ကုသမှု့ခံယူခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါက်တာ Antonio Amodeo မှ ဦးဆောင်ပြီး ရောမှမြို့ရှိ Bambino Gesu ခလေးဆေးရုံမှာ အစားထိုးခွဲစိတ်ကုသခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
တရားဝင် ပြောကြားချက်အရတော့ ထိုလူငယ်လေးဟာ အနှစ် ၂ဝ မှ ၂၅ နှစ်လောက်အထိ ပုံမှန်အတိုင်း အသက်ရှင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒေါက်တာ Antonio Amodeo က ထို စက်နှလုံးဟာ အရွယ် ၂ လက္မခွဲရှိပြီးဘယ်ဖက်အချမ်းမှာ ဒေါင်လိုက်ထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး နှလုံးရဲ့ ပင်မသွေးလွတ်ကြောနဲ့ ဆက်သွယ်ထားပါတယ် လို့ပြောပါတယ်။ ထို စက်နှလုံးဟာ လျှပ်စစ်နဲ့ အသက်သွင်းထားတဲ့ ဟိုက်ဒရောလစ် ပန့်တစ်မျိုးကဲ့သို့သာဖြစ်ပြီး ရင်အုံရိုးအောက်မှာထည့်ထားပါတယ်။ ထိုနှလုံးကို အလုပ်လုပ်စေတဲ့ ဘထ္ထရီကိုအားသွင်းဖို့အတွက်ကတော့
Posted by 925 at 07:530comments
Posted by 925 at 07:052comments
တရုတ်နိုင်ငံ အ​​နောက်​​မြောက်ပိုင်း​​ ရှန်ဇီး​​ရှိ တက္ကသိုလ် တစ်ခုအတွင်း​​ အများ​​သုံး​​ ​​ရေချိုး​​ခန်း​​တစ်ခုတွင် ​​ကျောင်း​​သား​​​​ကျောင်း​​သူ စုံတွဲများ​​ကို အတူတကွ ​​ရေချိုး​​ခွင့်​​​ ​​ပေး​​ထား​​​​ကြောင်း​​ သိရှိရသည်။
ယင်း​​ကိစ္စသည် ပညာ​​ရေး​​နယ်ပယ်တွင် လိင်လုပ်ငန်း​​တစ်ခု ​​ဆောင်ရွက်​​နေခြင်း​​အဖြစ် ​​ဝေဖန်မှုများ​​ မြင့်​​​တက်လာသည်။ အ​​နောက်​​မြောက်ပိုင်း​​ ပိုလီတက္ကသိုလ်တွင် ရှိ​​နေ​​သော အများ​​သုံး​​ ​​ ရေချိုး​​ခန်း​​ တစ်ခုသည် စုံတွဲများ​​အတွက် သီး​​ခြား​​ ​​ရေချိုး​​ခန်း​​ ၇ ခုကို ဖွင့်​​​လှစ်​​ပေး​​ထား​​သည်။ ​​ဒေါင်လိုက်အ​​နေအထား​​ Showerခန်း​​များ​​ ပါရှိ​​သော အခန်း​​ကို ၁၅ ယွမ်၊ ​​ရေချိုး​​ကန်ပါ​​သော အခန်း​​ကို ၁၈ ယွမ်ဖြင့်​​​ ငှား​​ရမ်း​​​​နေ​​ကြောင်း​​
Posted by 925 at 21:25 8 comments
Posted by 925 at 08:363comments
Posted by 925 at 08:110comments
နော်ဝေတွင် ဂျင်းပေါင်မုန့်ဖြင့် ပြုလုပ် ထားသည့် ရထား တစ်စင်း ကမ္ဘာ့စံချိန် တင်နိုင်ခဲ့
နော်ဝေ နိုင်ငံဟာ ဂျင်းနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ပေါင်မုန့်ကို အသုံးပြုပြီး ကမ္ဘာ့ အရှည်ဆုံး ရထား တစ်စီးကို စံချိန် အသစ် တင်ကာ ဖန်တီး တည်ဆောက် ပြလိုက်ကြောင်း သိရပါတယ်။ Oslo မြို့ရဲ့ဗဟို ဘူတာရုံမှာ တည်ဆောက် ပြီးစီးခဲ့တဲ့ အဲ့ဒီ ရထားဟာ ၂၀၆ မီတာ ရှည်လျားပြီး ရထားတွဲ ၆၁၇တွဲ ပါဝင်ကာ ၃ရက်ကြာ ဖန်တီး ပြုလုပ်ခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီ ရထားတွဲ တွေကို နေ့ကလေး ထိန်းကျောင်းနဲ့ စာသင် ကျောင်းမှ ကလေးငယ် လေးတွေက ဖန်တီးပြုလုပ် ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အလှဆုံး တန်ဆာဆင် ပေးနိုင်တဲ့ ရထားတွဲကို ဆုချီးမြှင့် ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရောင်စုံတဲ့ ဂျယ်လီတွေ၊ ရေခဲမုန့် တွေနဲ့ ဖန်တီးထား တာကြောင့် ရထားတွဲ အားလုံး လှပနေပြီး ဆုရွေးချယ် ပေးဖို့ ခက်ခဲခဲ့ရ ပါတယ်။ ယခင်က အခုလို ဂျင်းနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ပေါင်မုန့်ကို အသုံးပြုပြီး စံချိန်တင် တည်ဆောက် ခဲ့တဲ့ ရထားဟာ မီတာ ၁၅၀ ရှည်လျားပြီး ရထားတွဲ ၅၂၀ ပါဝင်ကြောင်း သိရပါတယ်။
Posted by 925 at 07:500comments
မိုက်ခရိုဆော့ဖ် ကုမ္ပဏီ ပူးတွဲ တည်ထောင်ခဲ့သူ တစ်ဦးမှ အာကာသ ယာဉ်တစ်စင်း တည်ဆောက်မည်
အမေရိကန် အခြေစိုက် နည်းပညာ ကုမ္ပဏီကြီး ဖြစ်တဲ့ မိုက်ခရိုဆော့ဖ် ကုမ္ပဏီကို ပူးတွဲ တည်ထောင်သူ Paul Allen က အာကာသ ယာဉ်တစ်စင်း တည်ဆောက်မယ့် စီမံချက်ကို ထုတ်ဖော် ပြောကြား လိုက်ပါတယ်။ အယ်လင်ရဲ့ အာကာသ ယာဉ်ဟာ လွန်းပျံယာဉ် တွေနေရာမှာ အစားထိုးဖို့ ဖြစ်ပြီး ဒုံးယာဉ် တွေကို ပစ်လွှတ်ဖို့နဲ့ အာကာသ အတွင်း ကုန်ပစ္စည်းတွေ သယ်ယူ ပို့ဆောင် ပေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ ကြီးမားတဲ့ အာကာသ ယာဉ်ဟာ ဂျမ်ဘိုဂျက် အင်ဂျင် ၆လုံး တပ်ဆင် ထားပြီး တောင်ပံ အလျားဟာ ၁၁၇ မီတာ ရှိပါတယ်။ အယ်လင် က အခုလို ပုဂ္ဂလိက အာကာသ ယာဉ်တွေ ပျံသန်း ပြေးဆွဲနိုင်ဖို့ စိတ်ကူး အိပ်မက်မက် ခဲ့ရကြောင်း သတင်းထောက် တွေကို ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အာကာသ ယာဉ်ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ စတင်ပျံသန်း ပြေးဆွဲပေး နိုင်ဖို့ ရည်မှန်းချက် ထားလုပ်ဆောင် နေပါတယ်။ ဒါဟာ အမေရိကန် အာကာသ စူးစမ်း လေ့လာရေး အဖွဲ့ နာဆာရဲ့ နှစ် ၃၀ကြာ ပြေးဆွဲခဲ့တဲ့ လွန်းပျံယာဉ် တွေကို ယခုနှစ်မှာ ရပ်နားခဲ့ ပြီးနောက် ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီတွေ အတွက် အာကာသ ယာဉ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း တွေကို လမ်းဖွင့် ပေးခဲ့တဲ့ အတွက် အကောင်အထည် ပေါ်လာတဲ့ စီမံချက် တစ်ရပ် ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
Posted by 925 at 18:260comments
ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေမှု တားဆီးနိုင်မည့် စနစ်တစ်မျိုး Facebook လွှတ်တင်
လွန်ခဲ့သည့် အင်္ဂါနေ့က လူမှုရေး ကွန်ရက်ဝက်ဆိုက်ဖြစ်သော Facebook မှာ ၎င်း၏ အဖွဲ့ဝင်များအကြားတွင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေစေမည့် လုပ်ရပ်များကို တားဆီးနိုင်စေမည့် လုပ်ဆောင်ချက် အသစ်တစ်ရပ်ကို လွှတ်တင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိသည်။ အဆိုပါစနစ်သစ်အရ ယင်းဆိုက်တွင် ဝင်ရောက်နေသည့် မည်သူမဆို အဆိုပါကဲ့သို့သော ဖြစ်ရပ်များ ဖြစ်စေနိုင်သည့် အရေးအသား ပုံစံမျိူးပေါ်ပေါက်လာပါက Facebook မှယင်းပုဂ္ဂိုလ်အား email ပေးပို့ပြီး သီးသန့်ဆွေးနွေးခန်း သဘောမျိုး ပြောဆိုနိုင်မည့် နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးသူနှင့် တိုက်ရိုက် ပြောကြားစေ မည်ဖြစ်ကာ ကယ်တင်နိုင်ရန် စီစဉ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ အလားတူပင် ယင်းဖြစ်ရပ်ကို အသိပေးသူရှိပါက ယင်းလူ၏ အမည်ကို လျှို့ဝှက်ထားမည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
Posted by 925 at 16:460comments
Posted by 925 at 10:125comments
Elizabeth Taylor ၏ လက်ဝတ်လက်စားများ ဒေါ်လာ ၁၁၆ သန်းဖြင့် စံချိန်တင်ရောင်းချနိုင်ခဲ့
သေဆုံးသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်သည့် ဂန္တဝင်သရုပ်ဆောင် Elizabeth Taylor ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သော လက်ဝတ်လက်စား များ ကို လေလံတင်ရောင်းချရာမှ တစ်ဆင့် ဒေါ်လာ ၁၁၆ သန်းအထိ စံချိန်တင်ရရှိခဲ့ကြောင်း Christie လေလံ အဖွဲ့မှ ပြောကြားခဲ့ကာ ၁၉၆၉ ခုနှစ်က သူမ၏ချစ်သူ Richard Burton မှ ဒေါ်လာ ၃၇၀၀၀ ဖြင့်ဝယ်ယူကာ လက်ဆောင်ပေးခဲ့သည့် လည်ဆွဲ မှာဒေါ်လာ ၁၁.၈ သန်းဖြင့် ရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်။
အဆိုပါလည်ဆွဲမှာ La Peregrina ဟုအမည်ရသည့် ၁၆ရာစုနှစ် ပုလဲပါဝင်ပြီး ပန်းချီဆရာ Velazquez မှပန်းချီဆွဲခဲ့ရသည် အထိ ကျော် ကြားခဲ့သည့် လည်ဆွဲတစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ အဆိုပါလည်ဆွဲ၏ မူရင်းပိုင်ရှင်မှာ Mary Tudor ဆိုသူဖြစ်ပြီးယင်းကို Burton မှဝယ်ယူပြီး လက်ဆောင်ပေး ခဲ့ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ယခုလေလံပွဲတွင် လေလံပွဲပြုလုပ်သူများ ခန့်မှန်းထားကြ သည့် ဈေးနှုန်းထက် နှစ်ဆ ခန့်ပိုမိုရရှိခဲ့ကာ သူမနှစ်သက်သော ၃၃.၁၉ ကာရက်ရှိ စိန်လက်စွပ်မှာ ဒေါ်လာ ၈.၈ သန်းဖြင့် ရောင်းချနိုင်ခဲ့ကြောင်းလည်း သိရသည်။
Posted by 925 at 10:590comments
မျောက်သည်းခြေအိတ်ဟာ လူသိများတဲ့ တရုတ်ရိုးရာ ဆေးဖက်ဝင် ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်... မျက်စိရောဂါနဲ့...၀မ်းဗိုက်ရောဂါတွေအပြင်... စိတ်တိုစိတ်ကြီးပြီး ၀ုန်းဒိုင်းကြဲတတ်တဲ့ ကလေးတွေ...ခေါင်းမာပြီး ခံပြောနားမထောင် လုပ်ချင်ရာလုပ်တတ်တဲ့ မျောက်မူးလဲကလေးတွေ အတွက်ပါ ကောင်းတယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
ဒါ့အပြင်..မျောက်ရဲ့ သွေးဟာလည်း လူကို ခွန်အားတိုးစေပြီး သက်လုံကောင်းစေတဲ့အပြင်အရွယ်တင်ပြီး နုပျိုခြင်းကိုပါ ဖြစ်စေပါတယ်...
အဲဒီအတွက် လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်တွေက လူတွေဟာ မျောက်သွေးနဲ့ အသားတွေကို လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြီး သုတေသနပြုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်..တဲ့. အချို့လူတွေဆိုရင် မျောက်ရဲ့မျိုးပွားအင်္ဂါတွေကိုတောင် အစားထိုးပြီး ကုသခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရှိ အချို့နေရာတွေမှာဆိုရင် ပန်းသေပန်းညိုးရောဂါ...ဒါမှမဟုတ်... စားကောင်းသောက်ဖွယ် တစ်ခုအနေနဲ့ မျောက်ရဲ့ ဦးနှောက်တွေကို ဖောက်ပြီး ယနေ့အချိန်ထိ စားသုံးနေကြဆဲ ဖြစ်ပါတယ်...
အင်မတန် သနားစရာကောင်းတဲ့ မျောက်သတ္တ၀ါတွေပါ...
@ lwan ma pyay
Posted by 925 at 06:062comments
လူတွေရဲ့ ပင်မဆဲလ်မှ ပြုလုပ်ထားတဲ့ သွေးတုကို ဗြိတိန် နိုင်ငံမှာ လာမယ့်(၃)နှစ် အတွင်း စမ်းသပ် အသုံးပြုနိုင်တော့ မှာ ဖြစ်ပြီး လာမယ့် ဆယ်နှစ်အတွင်း ဆေးရုံတွေမှာ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုနိုင်တော့မှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီး သူတွေရဲ့ ရိုးတွင်း ချဉ်ဆီနဲ့ သန္ဓေသား ပင်မဆဲလ်တွေမှ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ သွေးကို တီထွင်ရတာဟာ သွေးအလှူရှင် နည်းပါးမှုကြောင့်သွေးရှားပါးမှု ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် လူတွေ ဖန်တီးလိုက်တဲ့ သွေးအတုဟာ သွေးမသွင်းမီ လူနာကို သွေးအမျိုးအစား စစ်ဆေးစရာ မလိုတဲ့အတွက် စစ်မြေပြင်နဲ့ အရေးပေါ် အခြေအေ နတွေမှာ လူတွေရဲ့ အသက်ကို ကယ်တင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ သွေးတု စမ်းသပ်မှု အစီအစဉ်ကို Edinburgh တက္ကသိုလ်မှ သုတေသီတွေက ဦးဆောင် ပြုလုပ်တာ ဖြစ်ပြီး အရွယ် ရောက်ပြီး သူတွေရဲ့ ရိုးတွင်းချဉ်ဆီမှ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ အဆိုပါ သွေးတုကို ပထမဆုံး အနေနဲ့ လူသားတွေကို စမ်းသပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း စမ်းသပ်မှုတွေကို နောက်ထပ် အချိန် တစ်နှစ်မှ (၁၈)လအထိ ကြာမြင့်ဦးမှာ ဖြစ်ပြီး သန္ဓေသား ပင်မဆဲလ်နဲ့ အရွယ်ရောက်ပြီး သူတွေရဲ့ အရေပြား ဆဲလ်တွေက ရရှိတဲ့ အနီရောင် သွေးဆဲလ်တွေ ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ အထိ သုတေသီတွေက ကြိုးစား နေကြပါတယ်။ အခုလို သွေးအတု တီထွင်နိုင် တာဟာ လူသားတွေ အတွက် အကျိုးကျေးဇူး များစွာ ရရှိမှာ ဖြစ်တဲ့အပြင် HIV နဲ့ အသည်းရောင် အသားဝါလို ကူးစက်ရောဂါတွေ ကူးစက်ခံရမယ့် အန္တရာယ်မှ ကင်းလွတ်နိုင်မယ့် အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရရှိမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Posted by 925 at 19:450comments
ဂျူဒီ အန်ဒါဆန်ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးနေတဲ့ အိမ်ကလေးကတော့ တစ်ကယ့်ကို သစ်ပင်တွေနဲ့ ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ အိမ်ကလေးပါ။ ဗာဂျီးနီးယား နံရံကပ်ပင် (Virginia Creeper)ကလေးတွေ သူ့မရဲ့ အိမ်နံရံတစ်လျှောက်လုံးကို တွယ်ပေါက်နေပြီးတော့
ပြုတင်းပေါက်တွေပါ နေရောင်ခြည် မ၀င်နိုင်လောက်အောင်ကို အတော်များပြားနေပါသတဲ့။ သူမကတော့ “တစ်ကယ့်ကို သစ်ပင်အိမ်ကလေးပါပဲလို့” ပြောသွားပါသေးတယ်။
“ကျွန်မ ပြုတင်းပေါက်ကိုလည်း ကြည့်ပါဦး သစ်ရွက်တွေနဲ့ပြည့်လို့ နေရောင်နည်းနည်းပဲ ၀င်တော့တယ်လို့” သူမကဆိုပါတယ်။ ဒါဟာ ပူပြင်းတဲ့ နွေရာသီမှာတော့ အရိပ်ရပြီး
Posted by 925 at 19:260comments
ပင်လယ် ရေအောက် သတ္တုသိုက် ၁၆ မျိုးကို တရုတ်နိုင်ငံ တွေ့ရှိ
တရုတ် နိုင်ငံရဲ့ သုသေသန ဆိုင်ရာ ရေယာဉ် Ocean No.1 ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေ နေ့က Shandong ပြည်နယ်ရှိ Qingdao မြို့သို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိ လာခဲ့ပြီး ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဆိုပါ ရေယာဉ်ဟာ ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံး အဏ္ဏ၀ါ စူးစမ်း လေ့လာရေးကို ပြုလုပ် ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ လေ့လာမှု အတွင်း ပင်လယ် ရေအောက် သတ္တုသိုက် ၁၆မျိုးကို ရှာဖွေ တွေ့ရှိ ခဲ့ပါတယ်။
တက္ကသိုလ် ကျောင်းပေါင်း ၃၂ ကျောင်းမှ သုတေသီ ၂၁၈ ဦးတို့ဟာ ၃၆၉ ရက်ကြာမြင့်တဲ့ စူးစမ်း လေ့လာရေး ခရီးကို တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း Guangdong ပြည်နယ်မှာ စတင်ပြုလုပ် ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒါဟာ တရုတ် နိုင်ငံရဲ့ ၂၂ ကြိမ်မြောက် အဏ္ဏ၀ါ စူးစမ်း လေ့လာရေး ခရီးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ လေ့လာရေး ခရီးကို အိန်္ဒိယ၊ အတ္တလန္တိတ်နဲ့ ပစိဖိတ် သမုဒ္ဒရာ တစ်လျှောက် ရေမိုင် ၆ သောင်း ကျော်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ပင်လယ် ရေအောက် သတ္တုသိုက် ၁၆မျိုးကို တွေ့ရှိ ခဲ့ပါတယ်။ သတ္တုသိုက် ၁၆ မျိုးအနက် ၅မျိုးဟာ အန္တလန္တိတ် သမုဒ္ဒရာ အတွင်းမှ ဖြစ်ပြီး ၁၁ မျိုးကတော့ ပစိဖိတ် သမုဒ္ဒရာ အတွင်းမှ ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ် နိုင်ငံဟာ ၂၀၀၇ ခုနှစ် ကတည်းက သမုဒ္ဒရာ ၃ခုအတွင်း အဏ္ဏ၀ါ စူးစမ်း လေ့လာမှုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ပင်လယ် ရေအောက် သတ္တုသိုက် ၃၃ မျိုးကို တွေ့ရှိပြီး ဖြစ်တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
၁၉၄၅ ခုနှစ် ၀န်းကျင်လောက်ကပါ....Mike လို့ အမည်ပေးတဲ့ ကြက်တစ်ကောင်ဟာ ဦးခေါင်းမရှိပဲ (၁၈)လကြာ အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
ဖြစ်စဉ်က ဒီလိုပါ...အမေရိကန်နိုင်ငံ ကိုလိုရာဒိုပြည်နယ်က လယ်သမားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Lloyd Oslen ဟာ အိမ်လာလည်တဲ့
ယောက္ခမကြီးအတွက် ညစာချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ဖို့ ခြံထဲမှာရှိတဲ့ ကြက်တကောင်းကိုဖမ်ပြီး ရဲတင်းနဲ့ ခေါင်းကို ခုတ်ဖြတ်လိုက်တယ်....ဒါပေမဲ့ ကြက်ခေါင်းဟာ တစ်ခုလုံးပြတ်မသွားပဲ သုံးပုံတပုံလောက်သာ ပြတ်သွားပြီး အသက်မသေခဲ့ဘူး...ဒီလိုနဲ့ ကြက်ကို သေအောင်မသတ်တော့ပဲ ဒီလိုပဲထားလိုက်တယ်....
နောက်ပိုင်းမှာ Oslen တစ်ယောက် ခေါင်းမရှိတဲ့ ကြက်ပိုင်ရှင်အဖြစ် နာမည်ကြီးလာတယ်....သူဟာ နယ်လှည့်ပြီးတော့ ထူးဆန်းသတ္တ၀ါဆိုပြီး ပြပွဲတွေမှာ လိုက်လံပြသပါတယ်....ခေါင်းမရှိတဲ့ကြက်ကို ဒီလိုထားတဲ့အတွက် ဝေဖန်တာတွေလည်း ခံရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
ကြက်ကို အစာကျွေးတဲ့အခါ ဦးခေါင်းတ၀က်မှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ပါးစပ်ပေါက်ထဲကို ဆေးထိုးပိုက်သုံးပြီး ဂရုတစိုက် ကျွေးရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
နောက်ဆုံးမှာတော့ဦးခေါင်းမရှိတဲ့ကြက်မ Mike ဟာ Oslen ရဲ့မတော်တဆ ပေါ့ဆမှုကြောင့်
Posted by 925 at 08:300comments
​တောင်ဝင်ရိုး​စွန်း​သို့​ စွပ်ဖား​ဖြင့်​ သွား​​ရောက်နိုင်သည့်​ အသက်အငယ်ဆုံး​ မိန်း​က​လေး
အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ် ဗြိတိသျှ ​ကျောင်း​သူ​လေး​ အမီလီ ဟမ်ပလီမန် အဒမ်သည် ​တောင်ဝင်ရိုး​စွန်း​ ​ဒေသသို့​ စွပ်ဖား​ဖြင့်​ သွား​​ရောက်နိုင်သည့်​ အသက်အငယ်ဆုံး​ မိန်း​က​လေး​ ဖြစ်လာခဲ့​သည်။
သူမ၏ ဖခင်ဖြစ်သူ ​ဒေး​ဗစ် ဟမ်ပလီမန် အဒမ်၏ စွန့်​စား​မှု ​ခြေရာကို ထပ်တူလိုက်နိုင်ခဲ့​ပြီ ဖြစ်သည်။ သူမသည် ၁၇ ညလုံး​လုံး​ ဖြတ်သန်း​ခရီး​နှင်ပြီး​​နောက်
Posted by 925 at 02:420comments
သတို့​​သား​​နှင့်​​ သတို့​​သမီး​​ အချင်း​​ချင်း​​တိုက်ခိုက်ကြသည့်​​ မင်္ဂလာပွဲ
ချက်နိုင်ငံတွင် မင်္ဂလာပွဲ ကျင်း​​ပ​​နေစဉ်အတွင်း​​ သတို့​​သား​​၊​ သတို့​​သမီး​​ အချင်း​​ချင်း​​ ထသတ်သဖြင့်​​ ပွဲပျက်သွား​​​ကြောင်း​​ သိရှိရသည်။
မင်္ဂလာပွဲ စတင်ကျင်း​​ပစဉ်က ​​ပျော်ရွှင်ကြည်နူး​​စရာ အခမ်း​​ အနား​​​လေး​​ ဖြစ်ခဲ့​​​သော်လည်း​​ သတို့​​သား​​နှင့်​​ သတို့​​သမီး​​တို့​​ အချင်း​​ချင်း​​ တိုက်ခိုက်ရန်ပြုရာမှ အကျည်း​​တန်သွား​​​ကြောင်း​​ ချက်ရဲတပ်ဖွဲ့​​မှ ​​ပြော​​ရေး​​ဆိုခွင့်​​ရ အမျိုး​​သမီး​​ ဂျာနာ မာဇူရိုဗာက ​​ ပြောကြား​​ခဲ့​​သည်။
“သတို့​​သား​​​ရော၊​ သတို့​​သမီး​​ပါ အရက်​​သောက်ထား​​တယ်။ ရန်ဖြစ်ပြီး​​​တော့​​ နှစ်​​ယောက်လုံး​​ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်​​တွေနဲ့​​ ကျန်ခဲ့​​တယ်”ဟု ဂျာနာကဆိုသည်။ အသက် ၃၁ နှစ်ရှိ သတို့သမီး​​နှင့်​​ ၂၂ နှစ်အရွယ် သတို့​​သား​​တို့​​သည် ပရက်ဂ်မြို့​​မှ ​​တောင်ဘက် ကီလိုမီတာ ၁၀၀ အကွာရှိ ဟက်လီ​​ကော့​​တွင် လက်ထပ်မင်္ဂလာ ​​ဆောင်နှင်း​​ကြခြင်း​​ဖြစ်သည်။ “သတို့​​သမီး​​က အရက်​​သောက်ထား​​တာ စစ်ဖို့ ​​တော်​​တော်ငြင်း​​တယ်။ ရဲ​​တွေက သူ့​​​ယောက်ျား​​ကလည်း​​ ပြဿနာ ရှာမယ်လို့​​ ထင်​​နေတာ”ဟု ဂျာနာကဆိုသည်။
အဆိုပါ စုံတွဲသည် ဒဏ်​​ငွေချမှတ်ခြင်း​​ ခံခဲ့​​ရ​​ ကြောင်း​​လည်း​​ သိရသည်။ ဂျာနာက ယင်း​​မင်္ဂလာစုံတွဲ ကွာရှင်း​​ပြတ်စဲသည်ဆို​​သော သတင်း​​မျိုး​​မူ မရရှိ​​ကြောင်း​​လည်း​​ ​​ပြောဆိုသွား​​သည်။
Posted by 925 at 20:510comments
ရွှေသွားများတရားမ၀င် ရောင်းချမှုဖြင့် မီးသင်္ဂြိုဟ်သူ ခြောက်ဦးအား ဖမ်းဆီး
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် မီးသင်္ဂြိုဟ်ခံရသည့် ရုပ်အလောင်းများ၏ အရည်ပျော်သွားခဲ့သော ရွှေသွားများအား တရားမ၀င် ရောင်းချမှုဖြင့် မီးသင်္ဂြိုဟ်စက်မှ ၀န်ထမ်းခြောက်ဦးအား ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ၄င်းဝန်ထမ်းများသည် မီးသဂြိင်္ိုဟ်စက်ငါးခုမှ ၀န်ထမ်းများဖြစ်ပြီး ၄င်းတို့အနက် ၀န်ထမ်းတစ်ဦးသည် ရွှေရောင်းချရာမှ ၀မ်သန်း ၂၀ (ဒေါ်လာ ၁၇၇၃၀)ခန့် ရရှိခဲ့ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အဆိုပါရွှေများအား တရားမ၀င် ၀ယ်ယူမှုဖြင့် လက်ဝတ်ရတနာဆိုင်ပိုင်ရှင်တစ်ဦးနှင့် အခြားနှစ်ဦးကိုလည်း ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးထားသည်။
Posted by 925 at 18:330comments
Posted by 925 at 07:400comments
နှစ်ပေါင်း ၂၄၁၈ သက်တမ်းရှိသည့် ဂရိငွေဒင်္ဂါးပြားအား စတာလင်ပေါင် ၂ သန်းဖြင့် လေလံတင်ရောင်းချမည်
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရှေးအကျဆုံး ဂရိငွေဒင်္ဂါးပြားကို စတာလင်ပေါင် ၂ သန်းဖြင့် လေ့လံတင်ရောင်းချနိုင်ရန် စီစဉ်လျက်ရှိသောကြောင့် ယင်းငွေဒင်္ဂါးပြားသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဈေးအကြီးဆုံးအဖြစ် ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ အဆိုပါ ဂရိငွေဒင်္ဂါးပြားသည် လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း ၂၄၁၈ နှစ်က ပထမဆုံးအကြိမ် သွန်းလုပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည့် ငွေဒင်္ဂါးပြားဖြစ်ပြီး ၄င်း၏ တန်ဖိုးသည် တစ်နှစ်လျှင် စတာလင်ပေါင် ၁၀၀၀ နီးပါး မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ ၄င်းငွေဒင်္ဂါးပြား၏ တစ်ဖက်တွင် လင်းယုန်ငှက်ပုံတစ်ပုံနှင့် အခြာတးစ်ဖက်တွင် ငယ်ရွယ်သော လုလင်ပျိုတစ်ဦးက မြင်းလေးကောင်ဆွဲသော စစ်မြင်းရထားကို မောင်းနှင်နေသည့်ပုံများ ထွင်းထုထားသည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ယင်းငွေဒင်္ဂါးပြားပုံစံမျိုး ၁၂ ခုရှိသည့်အနက် ယင်းငွေဒင်္ဂါးသည် တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်ပြီး ပြတိုက်များတွင် ၄င်းငွေဒင်္ဂါးပြားပုံစံ ခြောက်ခုကို ပြသထားကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ ငွေဒင်္ဂါးအား ရှေးဟောင်း ပစ္စည်းများစုဆောင်းရာတွင် ၀ါသနာပါသူ အမေရိကန်နိုင်ငံသားတစ်ဦးက သိမ်းဆည်းထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ငွေဒင်္ဂါးပြားကို ဒင်္ဂါးနှင့် တံဆိပ်လေ့လာမှုဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းက နယူးယောက်ခ်မြို့၌ ဇန်န၀ါရီ ၄ ရက်တွင် လေလံတင်ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Posted by 925 at 04:260comments
Posted by 925 at 10:250comments
Posted by 925 at 10:040comments
X'mas မှာ မမတို့ ဘယ်လို ဖက်ရှင်မျိုးနဲ့ ပွဲတက်ကြမလဲ ???
Posted by 925 at 09:510comments